Archive du 11-mars-2022
Tao anatin’ny 60 taona Ity no fitondrana kitoatoa indrindra
Ity no fitondrana kitoatoa indrindra tao anatin’ny 60 taona. Tena tanteraka tao anatin’ny 3 taona, fa tsy miandry 5 taona akory ny hadalana rehetra tsy hita tao anatin’ireo mpitondra nifanesy.
Hita ho mandrimandry hatrany hatramin’izao ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-miseho rehetra, tsy eto amin’ny firenena ihany,
Minisitra mifamingana Efa mitady ho vaky ny sambo
Raharaha nafana nanamarika ity herinandro ity ny momba ny valizy misy kodiarana na “valise à roulettes” sy ny solosaina enti-tànana na “ordinateur portable”
Mboazafy Noé Rakotoarivelo na Razily “Tokony ovaina toy io Kianja Barea io ny Kianja Makis”
Tsy nitotongana ny Rugby Malagasy ary tsy haiko na odiantsika tsy fantatra fa tompondakan’i Afrika ny taona 2019 ny Makis U20,
Ambatofotsy – Tsiroanomandidy Nofiraina tamin’ny antsy ny loha sy ny tanan’izy 3 vavy
Nampivarahontsana ireo fokonolona tao amin’ny fokontany Ambatofotsy –Tsena kaomina ambanivohitra Bemahatazana, distrika Tsiroanomandidy faritra Bongolova ny zava-niseho ny alarobia 09 martsa teo.
Mitaraina ireo tena sahirana Lasa fanaovana bizina ny vatsy tsinjo
Nisavoritaka ireo vahoaka maro izay traboina tao amin’ny fokontany andrefan’ Ambohijanahary nandritry ny fizarana ny tosika fameno sy ny vatsy tsinjo avy amin’ny fanjakana omaly maraina.
Mitaraina ny mpandray fisotroan-dronono “Mbola niasa 12 taona fanampiny aho, ny vola tsy arak’izay”
Mivanàka ary very fanahy aho nahita ny zavatra mikasika ny zava-misy ao amin’ny CNaPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale), hoy Atoa RR, raim-pianankaviana mpikambana ao amin’ny CNaPS).
Vehivavy bevohoka Zava-dehibe ny fanaovana ekografia
Tena manan-danja eo amin’ny fiainan’ny vehivavy bevohoka ny fanaovana ekografia na ny fitarafana ankoatra ireo marary tsotra.
Fanovana faktiora Karohina i Ericka, efa nahazo 16 tapitrisa ariary
Niasa tamina orinasa lehibe iray ary miandraikitra ny vidina entana no ataon’ny vehivavy iray izay namoahan’ny polisim-pirenena filazana fikarohana omaly.
Fitsaboana sy fahasalamana Maro ireo marary voa matin’ny Covid 19
Mora handairan’ny Covid 19 ireo olona mararin’ny voa raha araka ny fanadihadiana natao. Mora ho azy ireny mantsy ny hahatongavany any amin’ilay forme grave tranga izay tena mahafaty haingana tokoa.
Raissa Razaivola Hiakatra fitsarana anio
Ny 8 febroary teo no namoaka filazana fikarohana an’i Raissa Razaivola noho ny fikasana hamono olona ny polisim-pirenena.
Analamahitsy tanàna Notokanana ny kianja “multisports” faharoa
Notokanana omaly tetsy Analamahitsy tanana ny kianja “multisports” faharoa M’Hetsika MVola. Araka izany anarany izany dia tohin’ireo tetikasa kianja marolafy eo anivon’ny orinasa MVola
Tofoka hatramin-dRajoelina Hiova rahampitso ny governemanta farafahafatarany
Hiditra amin’ny fanovana governemanta izay efa faninefany amin’ity ny Filoha, ary ho endrika fahadimy taorian’ny fanendrena voalohany ny 24 janoary 2019 io.
Malagasy lasibatry ny tany Arabo Miverina ny fampodiana sahanin’ny AZIG
Miverina tsikelikely ny famerenana an-tanindrazana an’ireo mpiasa malagasy avy any amin’ny tany arabo. Nampahafantatra ny hisian’io fahafahana mody io ny fikambanana “Zanak’i Gasikara” na ny AZIG, mpikarakara ny dian’izy ireo omaly.
Rafanomezantsoa Georges “Tsy hisy hanana tombontsoa amin’ny ady”
Am-pahendrena amiko ny fanamboarana na fanovan’ny filoham-pirenena governemanta, hoy ny mpanao politika sady mpandrindra teti-pivoarana na “planificateur”,
Kaominin’Ambohitrimanjaka “Mafy amin’ny vehivavy ny herisetra ara-moraly”
Hetsika maro toy ny diabe sy famondronana ireo vehivavy isam-pokontany no natao teny amin’ny kaominin’Ambohitrimanjaka ho fanamarihana ny 8 martsa lasa teo,
Toliara Maty voatifitra ilay jiolahy efa nokarohina fatratra
Jiolahy iray, 28 taona, efa nokarohin’ny Polisy fatratra no lavon’ny Balan’ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny Commissariat Central ao Toliara afak’omaly alarobia 09 martsa.
Kaominin’Alasora 400 isan-taona ny fangatahana fanorenana voaray
Anisan’ny tanana tena mihitatra sy mandray vahiny ny tananan’Alasora, distrikan’Antananarivo Avaradrano. Raha araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanana Randriantsoa Jimmy omaly mantsy dia mahatratra 400 isan-taona ny fangatahana fanorenana voarain’izy ireo.
Vinaninkarena Antsirabe Maty nofaohan’ny kamiao ilay mpitondra cyclo-pousse
Olona roa no maty nofaohan’ny kamiao ny marainan'ny talata 08 martsa teo, tany Alavarano avaratra Vinaninkarena Antsirabe.